राजधानी बाहिर धुलिखेल बाहेक चितवनको भरतपुर अस्पतालमा यो सेवा शुरु भएको हो । यो प्रविधिद्धारा पित्तनलीमा रहेको ढुङ्गा निकाल्ने, पित्त नलिको जाँच गर्ने, पथ्थरीको ट्युमर परजीवि हेर्ने, नली साधुरो भएको भए जाँच गरी स्टाण्ड राख्ने काम गरीने अस्पतालका सर्जन डा. श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर अस्पतालमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बीच यो सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ ।
धुलिखेल अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सकद्धय राम गुरुङ्ग र विवेक पूर्वे तथा भरतपुर अस्पतालका सर्जन डा. आषिश पुनले अप्रेशन थ्रिएटरमा गरेको बिरामीको उपचार लाइभ भिडियो मार्फत सभाहलमा देखाइएको थियो । सभा हलमा रहेका क्यान्सर अस्पतालका बरिष्ठ सर्जन डा. बिनय ठाकुर र भरतपुर अस्पतालका डा. सुरेश प्रधानले उपचाररत चिकित्सकहरूसँग कम्युनिकेशन गरेका थिए । आज शुक्रवार २ जना बिरामीहरुको पित्तनलीमा रहेको पथ्थरी मुखवाट पाइप राखेर निकालिएको थियो । भरतपुर अस्पतालले ४२ लाख रुपैयाको लागतमा यो मेशिन भित्राएको हो । उपचार पद्धतीमा यसलाई बिशिष्टकृत सेवा भित्र राखिएको छ ।
क्यान्सर अस्पतालका बरिष्ठ सर्जन डा. विनय ठाकुरले पित्त नलीको क्यान्सर भएर साँघुरो भएको, अप्रेशन गर्न नमिल्ने, पत्थरी र जण्डिस भएका बिरामीहरूमा स्टाण्ड राख्नका लागि यो उपचार सेवा निकै प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । नेपालको विर अस्पताल, टिचिड्ड अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा मात्रै रहेको यो सेवा अब भरतपुर अस्पतालमा पनि शुरू भएको छ । “यो उपचार पद्धती निकै भरपर्दो र प्रभावकारी छ”भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले भन्नुभयो, “बिरामीलाई अप्रेशन गर्नुपर्ने, घाउ पाक्ने, ढिलो निको हुने, रकम र समय दुवै खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य इआरसिपी उपचार पद्धतीबाट हुन्छ ।” भरतपुर अस्पतालले यो प्रविधीद्धारा मात्रै ९ हजार रुपैयामा सेवा दिने भएको छ ।
चितवनका अन्य कुनै पनि नीजि अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरुमा यो सेवा उपलब्ध छैन् । बाहिरका अस्पतालमा उपचार गराउदा ५० हजार रूपैयासम्म खर्च हुन्छ । भरतपुर अस्पतालको सर्जरी विभाग र मेडिसिन विभाग मिलेर सेवा दिने मेसु डा. मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालले सर्जरी विभागका डा. आशिष पुन र केही नर्सहरूलाई इरासिपी उपचार प्रविधीका बारेमा तालिमका लागि समेत पठाएको थियो । भरतपुर अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष विजय सुवेदीले भरतपुर अस्पतालबाट बिशिष्टकृत सेवा आरम्भ भएको भन्र्दै यसबाट गरी,विपन्न, असाहयहरूले पनि लाभ उठाउन सक्ने वताउनुभयो ।